Golaha Xukuumada KMG oo kulan ka yeelanaya Qaraxii Muqdisho (DHAGEYSO) – SBC
Golaha Xukuumada KMG oo kulan ka yeelanaya Qaraxii Muqdisho (DHAGEYSO)
Posted by Webmaster on Aktoober 4, 2011 Comments
Waxaa kulan balaaran ku leh Magaalada Muqdisho Golaha Xukuumada KMG oo ku aadan inay ka hadlaan dhacdadii Maanta lagu weeraray Dhismayaal ay leedahay DKMG ee Soomaaliya iyadoo halkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay Masuuliyiin ka tirsan Dowlada Soomaaliya iyo Dad rayid ah oo ay ku jiraan ardaydii deeqda waxbarasho ka heshay Dowlada Turkiga.
Kulanka golaha wasiirada loogu yeeray waxaa u sheegay saxaafada Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta C/qaadir Xuseen Maxamed jahweyn isaga oo sheegay in Golaha wasiirada ay war ka soo saari doonan dhacdadan foosha xun ee ay ku dhinteen dad ku dhow 70 qof .
Dhageyso Codka wasiirka Warfaafinta DKMG
Sidoo kale wasiirka warfaafinta waxaa uu sheegay in uu socdo gurmad balaaran oo loo sameynayo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkan qaraxa isaga oo xusay in dowlada ay saacadaha soo scoda warsugan ka soo saari doonto sida wax u dhaceen iyo khasaaraha inta uu la’egyahay.
Mar wasiirka la weydiiyay inay jiraan cadeymo horudhac ah oo la helay in uusan iminka ka hor dhaceyn baaritaanka socda isaga oo sheegay in goor dhow ay war ka soo saari doonan.
Dhacdada manta ka dhacday Magaalada Muqdisho waxay ku soo beegmaysaa xilli mudooyinkan madaxda DKMG ay ka hadlayeen weeraro ismiidaamin oo ay alshabaab qorsheyneyso inay ka geysto Goobaha la isugu yimaado .
Dhinaca kale Website ay leeyihiin Xarakada alshabaab oo hoostaga mid ka mid ah idaacadahooda ayaa waxaa uu sheegay in warsaxaafadeed horudhac ah oo ka soo baxay alshabaab lagu sheegtay masuuliyada weerarkan iyadoona ay shabaabku sheegteen inay goobtan ku weerareen Ciidan nabad sugida DKMG loogu soo tababari lahaa dalka dibadiisa Warkaasina DKMG welikama hadlin.